Apple haibvise mitero pakugadzirwa kweMac Pro | Ndinobva mac
Apple haibvise mutero mukugadzirwa kweMac Pro
Zvaiita kunge Apple yaizokwanisa kubvisa mitero inotungamirwa naTrump manejimendi kune zvigadzirwa zvinotengeswa kubva kuChina. Nenzira iyi, iyo Mac Pro inogona kunge isina yemitero inogona kuwedzera mutengo wekugadzirwa kwayo uye pamwe nemutengo wayo wekupedzisira. Zvakadaro Kubuda kwenhau kunosimbisa kuti izvi hazvizove zvakadaro.
Apple ichafanirwa kusangana nemitero yemitero kana ichida kuenderera iine zvimwechetezvo izvo zvino izvo zvinokwidza Mac Pro, sezvo mamwe acho achigadzirwa uye achiunzwa kubva kunyika yekumabvazuva.
Iyo Mac Pro haina kusunungurwa zvachose kubva kumitero yemitero
Hofisi yemumiriri weUnited States Trade yakaramba chikumbiro chaApple chekuregererwa kwemitero yezvimwe zvinhu zvakagadzirwa muChina uye zvaidikanwa pakugadzirwa kwe "mhuka" yeApple yazvino. Iyo kambani inotungamirwa naTim Cook yakakumbira kuti ikwanise kubvisa iyo 25% yemitero iyo yainoda kumisikidza paMac Pro mavhiri, redunhu bhodhi rinotarisira iyo yekuisa uye inoburitsa madoko, adapter yemagetsi pamwe chete netambo yekuchaja, uye inotonhodza sisitimu ye processor.
Izvi zvikumbiro ivo vakanyimwa zvakanyanya nekuti zvave zvisingaite kuratidza kuti kuregererwa pamutero webasa kunogona kukonzera kukuvara kwakanyanya kwehupfumi kukambani kana kuUnited States.
Nhau idzi dzinobonderana neimwe yataitoziva muzuva rayo uye mune iyo hofisi imwechete iyo zvino inoramba izvi kusunungurwa zvishanu, hongu yakatendera mamwe gumi akumbirwa nekambani. Uku kukunda kudiki kwakaita kuti Apple iite sarudzo yekugadzira Mac Pro zvachose muAustin, Texas., kunyangwe Mutungamiri Trump akafara, kuburikidza neTwitter, yesarudzo yakaitwa naApple.
Tichaona izvo izvo Apple inosarudza neiyi diki mhinganidzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Mac Pro » Apple haibvise mutero mukugadzirwa kweMac Pro
Social Technologies inomhan'arira Apple pakushandisa zvisina kufanira chiratidzo
Apple inogadziridza iyo iWork suite yeMacs